Laba ka tirsanAskarta Kenya oo ku dhintay Weerar ay shabaabku ku qaadeen Xaddka Soomaaliya ay la wadaagto – Radio Muqdisho
Laba ka tirsanAskarta Kenya oo ku dhintay Weerar ay shabaabku ku qaadeen Xaddka Soomaaliya ay la wadaagto
Ugu yaraan lab aka tirsan ciidamada booliiska ee Kenya ayaa ku dhintay weerar ay al-shabab ku qaadeen kolonyo ciidamada booliiska Kenya ah oo marayey jidka isku xira Mandera iyo Ceel Waaq.
Weerarkan oo laga soo xigtay idaacadda VOA ayaa sheegaya in maleehsiayda Al-Shabab ay u adeegsadeen gantaallo garabka laga tuuro iyaga oo burburiyey mid ka mid ah baabuurta booliiska halkaaisna ku dilay lab aka mid ah ciidanka.
Ilaa hadda ma cadda khasaaraha gaaray dhinaca maleehsiyada Al-Shabab, mana jirto wax war ah oo ka soo baxay Dowladda Kenya oo ku aaday qasaaraha Weerarkaan.
Weerarrrada ka dhaca degaankaas ayaa inta badan ay sheegaan maleeshiyada Al-Shabab mas’uuliyadooda.
Dhowaanna booliiska Kenya waxay ka digeen in maleehsiyada Al-Shabab ay kooxo hubaysan u dirayaan gudaha Kenya si ay weerarro u gaystaan xilliga roobka oo maritanaka jidadku adag yihiin.
Hey’adda Nabad sugidda oo soo bandhigtay ajaanib dalka ku faafineysay Mad habta Shiicada+War-saxaafadeed
R/wasaare ku xigeenka oo maanta xarigga ka jaray Machadka horumarinta Tamarta iyo Biyaha